पिउने होइन त साङ्गलाको शरबत ? यस्तो रोगको निको हुन्छ, खतरा पनि छ है ! | Rajmarga
पिउने होइन त साङ्गलाको शरबत ? यस्तो रोगको निको हुन्छ, खतरा पनि छ है !
साङ्गला भलै तपाईलाई मन पर्दैन होला वा साङ्गलादेखि तपाई डराउनु हुन्छ होला । तर चिनियाँ नागरिकका लागि यो राम्रो कमाईको माध्यम हो ।
साङ्गलामा रहेको सम्भावित औषधीय गुणका कारण चिनियाँ उद्योगका लागि व्यवसायिक अवसरजस्तै हो । चीनसहित कयौ एसियाली देशमा साङ्गला खाने गरिन्छ । तर अब यसको ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न थालिएको छ ।
चीनको शीचांग सहरको एउटा औषधि कम्पनीले हरेक वर्ष ६०० करोड साङ्गला पालन गर्ने गरेको छ। साउथ चाइना मर्निङ्ग पोस्टका अनुसार एउटा भवनमा साङ्गला पालन गरिएको छ। यो भवनको क्षेत्रफल करिब दुई खेल मैदान बराबर छ ।
भवनभित्र दराजजस्तो पातलो साङ्गा बस्ने स्थान छ । साङ्गलाका लागि खाने, पिउने व्यवस्था छ । भित्र अँधेरो हुन्छ र वातावरण गर्मी बनाएर राखिन्छ । फार्मभित्र साङ्गलालाई घुम्ने र प्रजनन गर्ने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ ।
साङ्गलाहरुलाई सुर्यको किरणबाट टाढै राखिन्छ र उनीहरु भवन बाहिर जान पाउँदैनन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टमबाट साङ्गला पालनमा ध्यान राखिन्छ । यसको माध्यमबाट भवनभित्रको तापक्रम, खाने कुराको उपलव्धता र गिलोपनमाथि नियन्त्रण राखिन्छ ।
कम्पनीको लक्ष्य कम समयमा बढीभन्दा बढी साङ्गला उत्पादन गर्ने हुन्छ ।
जब साङ्गला वयस्क हुन्छ, तब त्यसलाई कुच्याउन्छ र यसको शरबतका रुपमा चीनको परम्परागत औषधिका रुपमा पिउने गरिन्छ । यसको प्रयोग झाडापखाला,, बमिट, पेटको अल्सर, स्वासप्रस्वासको समस्या र अन्य रोगको उपचारका लागि गरिन्छ ।
शानडाँङ्ग एग्रीकल्चर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर तथा इन्सेक्ट एसोसिएसन अफ शानडाँङ्गका प्रोभिन्स निर्देशक लियू यूशेंगले द टेलिग्राफ पत्रिकासँग भने–यो वास्तवमै एउटा चमत्कारिक औषधि हो ।
उनले अगाडि भने–साङ्गाले कयौ रोगको उपचार गर्न सक्दछ र अन्य औषधिको तुलनामा यो निकै तिब्रताका साथ काम गर्दछ ।
प्रोफेसर लियूले भने–वृद्धवृद्धाको आवादी चीनको समस्या हो । हामीहरु नयाँ औषधि खोज्ने कोशिस गरिरहेका छौ र यो पश्चिमी देशका औषधिभन्दा सस्तो हुनेछ ।
औषधिका लागि साङ्गला पालन सरकारी योजनाकै एउटा हिस्सा हो र यसको औषधि अस्पतालमा प्रयोग गरिन्छ ।
तर, कयौ यस्ता पनि छन् जो यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । बेइजिङको चाइनिज एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सका एक शोधकर्ताले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साइथ चाइना मर्निङ्ग पोस्टसँग भने–साङ्गलाको शरबत रोगको उपचारका लागि रामबाण उपचार होइन । यसले सबै रोगहरुमा जादुमयी असर देखाउँदैन।
यसरी एउटा बन्द स्थानमा यसप्रकारको किरा पाल्नु र पैदावार बढाउनु खतरनाक सावित पनि हुन सक्दछ ।
चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सका प्रोफेसर झु केयोडाँन्ग भन्छन्–यदि मानिसको गल्ती वा भूकम्पका कारण अर्बौ साङ्गला बाहिर आयो भने त्यो विनाशकारी पनि सावित हुन सक्दछ ।बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: यी हुन् मोबाइल नबोक्ने ‘ठूला मान्छे’
Next post: यस्तो रहेछ सुन काण्डमा गोरे-प्रहरी ‘कनेक्सन’
कुन होला विश्वकै बस्नयोग्य सुन्दर सहर ? कुन सहर सबैभन्दा खत्तम ?
निर्मला हत्याको थप अनुसन्धान सुरु, कञ्चनपुर बिहानैबाट अशान्त